🙏🏻 မင်္ဂလာပါရှင် 🙏🏻 🍀အောင်မြေသာစံမြို့နယ် 🍀 ✍🏼 S ( 216 ) 🏠 RC (3) ထပ်👉 အရောင်း 👈 လေး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ⛲️မန္တလေးကျုံးအနီးလမ်းမတင် 📏 ပေ ( 50 x 100 ) , အနောက်လှည့် 💁‍♀️ ခေတ်မှီသေသပ်လှပသော အိမ်အပြင်အဆင်များဖြင့် 💸 သိန်း ( 17000 ) တန် ...
🙏🏻 မင်္ဂလာပါရှင့် 🙏🏻
🙏🏻 မင်္ဂလာပါရှင့် 🙏🏻 🍀 ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် 🍀 ✍🏼 S ( 1073 ) 💁‍♀️ ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီး 🏠 RC (3) ထပ် 👉 အရောင်း 👈 လေး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် 🤗 🛣 ( 68 x 73 ) လမ်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ 📏ပေ ( 20 x 60 ) , အရှေ့လှည့် 👫 Shopping ...
#ဈေးတနိ Condo အရောင်း
#ဈေးတနိ Condo အရောင်း #တာမွေမြို့နယ် #စက်မှုလမ်းသွယ် #ဝေဇယန်တာ အားကစားရုံ ဘေးမှ ဝင် 5Floor 1280Sqft 1Master Room 1Singel Room RC ခင်း ရေချိုးခန်း အိမ်သာ ၂စူံ ကိုယ်ပိုင်ကားပါကင် lift ဘေးတိုက်အမြင့်မရှိ အလင်းရောင် ကောင်းစွာရ ဈေးနှုနိး ၉၅၀ ...
စမ်းချောင်းသီးသန့် ဌားရန် ရှိပါသည် အောင်သပြေလမ်း...၂၅ပေ. ၇၅ပေ. ပထမထပ် အခန်း ၂ခန်း...ကြွေပြားခင်း...2,Aircon...မီးဖိုခန်း..ရေချိုးခန်း..အိမ်သာကြွေပြားခင်း/ကပ်...ပြင်ဆင်ပြီး မှတ်ချက်။ ။ရုံးခန်း,ကုမ္ပဏီတို့နှင့်အထူးသင့်လျော်ပါသည် ဈေးနှုန်း... ...
Two Bedroom Plus Studio room Of Crystal Residence For Sale
Two Bedroom Plus Studio room Of Crystal Residence For Sale Location - Crystal Residence, Kyun Taw Road, Kamayut Township. Swimming Pool and Gym 24hrs security, Lift, Car Parking and Backup Generator information of Two-bedroom One Master Bedroom ...
👍မရမ်းကုန်းထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(1538) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 3ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်ကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 2Master bedrooms 👉 1Single ...
ဈေးတန် Condo အရောင်း
ဈေးတန် Condo အရောင်း #တာမွေ မြို့နယ် #စက်မှုရပ်ကွက် #စက်မှု လမ်းမကြီးအနီး _1280Sqft -1Master Room -1Singel Room -ပါကေးခင်း _Living Room _Dinning Room _ကားပါကင် _ Generator Back Up(Lighting&Lift) _ဘဏ်နဲ့ ချိတ် ဝယ်လို့ရ 1Floor - 1250Lakh ...
**​ ​ ​Condos For Sale ** _______________________ 1. ​​Royal Parami Residence ၊ မရက (1670Sqft) M1,S2 (​1Sqft - 2သိန်း) 2. ​သဇင်​ Condo၊ အလုံ (1670Sqft) M2,S1,အကြမ်း (1Sqft-1.6သိန်း) 3.​ ​​​ရှမ်းရိပ်​သာ Condo၊ စခ (1748Sqft) M1,S2 (1Sqft- ...
Check this url: https://www.lotayaproperty.com/property-for-sale?page=6